Yaan nahay - NBC Electronic Technologic Co., Ltd.
NBC Electronic Technologic Co., Ltd. (NBC) waxay ku saleysan tahay Magaalada Dongguan, Shiinaha, oo xafiisyo ku leh Shanghai, Dongguan (Nancheng), Hong Kong, iyo USA. Shirkadda sumcadda caanka ah ee shirkadda, ANEN, waa astaanta badbaadada badeecada, isku halaynta, iyo hufnaanta tamarta. NBC waa soosaaraha hormuudka ka ah qalabka elektiroonigga ah iyo isku xirayaasha awoodda. Waxaan la dhignay xiriir shuraako muddo dheer leh sumado badan oo heer sare ah. Warshadeenu waxay dhaaftay ISO9001, ISO14001, IATF16949 shahaadooyinka.
Iyada oo in ka badan 12 sano waayo-aragnimo u leh qaybaha qalabka birta elektiroonigga ah, adeegyadayada waxaa ka mid ah naqshadeynta, qalabaynta, shaabadaynta birta, wax-ka-beddelidda biraha (MIM), ka-shaqaynta CNC, iyo alxanka laser, iyo sidoo kale dhammaynta dusha sida dahaarka buufinta, korontada, iyo jirka dhigidda uumiga (PVD). Waxaan bixinnaa ilo kala duwan oo madaxa gasha, sliders, koofiyadaha, koofiyadaha iyo qaybaha kale ee qalabka loo habeeyay oo loogu talagalay sameecadaha dhagaha sare ee sare iyo nidaamyada maqalka, oo leh tayo sare leh iyo hubinta kalsoonida.
Sida shirkad tiknoolajiyad sare leh oo leh horumarin wax soo saar oo isku dhafan, wax soo saar, iyo tijaabin, NBC waxay awood u leedahay inay bixiso xalal dhammaystiran oo la habeeyay. Waxaan leenahay 40+ shatiyo iyo hanti aqooneed oo is-hormariyay. Xiriirayaasheena taxanaha buuxa, oo u dhexeeya 1A ilaa 1000A, waxay dhaafeen shahaadooyinka UL, CUL, TUV, iyo CE, waxaana si weyn loogu adeegsadaa UPS, korontada, isgaarsiinta, tamarta cusub, baabuurta, iyo codsiyada caafimaadka. Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo qalabaysan oo si gaar ah loo habeeyay iyo adeegyo isku xirka fiilada si wax looga qabto baahiyaha macmiilka.
NBC waxay rumeysan tahay falsafadda ganacsi ee “daacadnimo, waxqabad, is-faa’ido, iyo guul-wadaag”. Ruuxayagu waa "hal -abuurnimo, iskaashi, oo ku dadaala sida ugu fiican" si loo siiyo macaamiisha tayada ugu wanaagsan iyo qiimaha tartan. Intaa waxaa dheer in diiradda la saaro hal -abuurka teknolojiyadda iyo tayada wax -soo -saarka, NBC waxay sidoo kale u hibeysaa adeegyada bulshada iyo samafalka bulshada.